काठमाडौको मुख्य चोकमा हरेक दिन दर्जन कण्डम किन्ने युवतीहरु भित्रको रहस्य – Jagaran Nepal
काठमाडौको मुख्य चोकमा हरेक दिन दर्जन कण्डम किन्ने युवतीहरु भित्रको रहस्य
काठमाडौ । राजधानी काठमाडौको मुटु मानिने गौशला चोकमा रातपरेपछि नियाल्ने हो भने निक्कै गज्जबका दृष्य देखिन थालिसकेका छन् ।
तर रातिको मात्र हैन आज हामी साँझ देखिकै कुरा प्रस्तुत गर्दैछौ । साँझको मात्र ६ः३० भएको छ ।
अत्यन्तै आकर्षक पोसाकमा सजिएका केही युवतीहरु मुख्य चोकमा देखा पर्छन् । नजिकै रहेको पान पसलेतर्फ उनीहरु पुग्छन् । उनीहरु हेर्दा नै डान्स बार र दोहोरिमा काम गर्ने युवती भन्ने पोसाकले नै प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
कहानी त्यही पान पसलदेखि सुरु हुन्छ भन्ने यसअघि नै थाहा पाइसकेकाले रिपोटिङ्गका लागि प्रमाण जुटाउने काम मात्र बाँकी थियो । बाँकी के हुन्छ भन्ने कुरा श्रोत बोलिसकेको थियो ।
पान किन्ने बहानाले म पनि नजिकै पुगिसकेको थिए । युवती सँधै झै पान पसलेकामा पुग्छन् । युवतीहरुले ४–४ प्याकेटका दरले कण्डम माग्छन् । एउटीले २ वटा भए पुग्ने बताउँछिन् । त्यत्तिकैमा अर्की बोलिन् हिजो दिन बिग्रियो की क्या हो खपत त भएन छ !
उनले सुनिरहिन् शब्द निकाल्ने हिम्मत गरिनन् । त्यसपछि उनीहरु कण्डम ब्यागमा हालेर र हिँडे । कहाँसम्म पुग्छन् मेरो ध्यान त्यतातर्फ थियो । उनीहरु आसपासका बार र दोहोरिका ढोकाबाट बिलाए ।
अब पान पसेलेसँग केही गफिनु थियो । एउटा मिठा पान मगाए । दाईले पान बनाउँदै गर्दा शब्द प्वाक्क फ्यालिहाले । उनीहरु सँधै किन्छन् ? हो नी हरेक दिन ४ प्याकेट त एउटीले बोक्छन् । पान पसल भरे खुल्दैन । अहिले नै व्यवस्था गरेर जान्छन् । उनीहरु किन औषधि पसलमा जाँदैनन् ।
हामीसँग हेपेर बोल्न पाउँछन् सजिलै किन्छन् त्यता लाज लाग्छ होला नी । अनि तपाईकोमा कण्डम किन्ने पुरुष कि महिला वेसी हुन्छन् ? मैले सोध । यहाँ बसेदेखि महिला, युवती नै बढी आउँछन् । यो एरिया त बिकाउ बनिहाल्यो । अब बिक्नेहरुले बोकेर जानुपर्ने भएकाले हामीसँग किन्ने युवती नै बढी हुन्छन् । मलाई आँकडा निकाल्न मन लाग्यो ।
सोधे एक दिनमा कति प्याकेट बेच्नुहुन्छ ? सय प्याकेट त वेसी नै बिक्छ । भनेपछि एउटामा ३ वटा हुन्छ हैन । उनले भने हो कुनैमा ४ वटापनि हुन्छ हेरिहेरी । त्यसोभए तपाईको बाट मात्र हेर्दापनि ३ सय जना ता खरिद बिक्रि गर्नेवाला यतै रहेछन् । उनले भने मैले मात्र कहाँ बेच्छु यता आसपासका सबै पानपसलको अर्को नाफाको व्यपार हो यो ।
तपाई त लामो समय बस्नुभएको छ तपाईबाट बिक्रि भएका कण्डम कहाँ खपत हुन्छन् होला ? उनले थपे बिक्नेहरु केही गेष्ट हाउस लिएर जान्छन् । कोही माथी डान्स बार र दोहोरीमा ठाउँ नै बनाएका छन् रे । उनले भनेपछि हिँजो त्यही बाहिर भेटिएका एक किशोरको कुरापनि मिल्यो ।
केटीहरु कहाँ जान्छन् त भन्दा उनलेपनि हामी ग्राहक खोजेर डान्स बार, दोहोरी वा गेष्ट हाउस पुर्याउँछन् । त्यही हुन्छ काम । हामीले सम्वादमा आएको पात्रको गोप्यता सुरक्षित गर्न खुलाएका छैनौँ ।
तर यो कुराले के पुष्टि हुन्छ भने काठमाडौको गौशला अघोषित रेडलाईट एरिया बनिसकेको छ । आँखै अगाडी रहेको प्रहरी प्रशासन मौन त्यसै त पक्कै छैन । अर्को पृष्ठमा प्रहरीको मिलोमतोको सत्यता बाहिर ल्याउँनेछौ ।